X-Premium Inverter (R32) CS/CU-XU13XKH - Panasonic
24 နာရီလုံး လေထုအရည်အသွေးကို ထိန်းထားပေးရန် Panasonic ၏ X-Premium အင်ဗာတာတွင် nanoe™ X နည်းပညာနှင့် Panasonic Comfort Cloud အက်ပ် ပါရှိသည်။ AEROWINGS၊ iAUTO-X နှင့် စိုထိုင်းဆ အာရုံခံစနစ်ကဲ့သို့ Panasonic ၏ ဆန်းသစ်တီထွင်ထားသော နည်းပညာများဖြင့် အကောင်းဆုံး ပတ်ဝန်းကျင်တွင် သက်သောင့်သက်သာရှိသည့် အေးမြမှုကို ခံစားလိုက်ပါ။ အင်ဗာတာ နည်းပညာ၊ R32 အအေးပေးရည်နှင့် ECO စနစ်တို့ဖြင့် သက်သောင့်သက်သာရှိမှုကို မထိခိုက်စေဘဲ စွမ်းအင်ကို ထိရောက်စွာ အသုံးချလိုက်ပါ။ ကျစ်လျစ်သောဒီဇိုင်းကြောင့် နေရာကျဉ်းကျဉ်းတွင်ပင် တပ်ဆင်နိုင်ပြီး ၎င်း၏ ခေတ်မီပြီး ကျက်သရေရှိသော ပုံစံက မည်သည့်နေရာနှင့်မဆို လိုက်ဖက်ညီလှသည်။
nanoe™ X သည် တွယ်ကပ်နေသော ဆန်းသစ်သည့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် (SARS-CoV-2) ကို ထိန်းချုပ်ရာတွင် ထိရောက်မှုရှိသည်
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကန်ထရိုက်သုတေသနအဖွဲ့အစည်း Texcell သည် တွယ်ကပ်နေသည့် ဆန်းသစ်သော ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် (SARS-CoV-2) အပေါ် ဟိုင်းဒရော့ဆယ် ရဒီကယ်များ၏ အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အတူ nanoe™ X နည်းပညာ၏ ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းကို အတည်ပြုခဲ့သည်။ တွယ်ကပ်နေသည့် ဆန်းသစ်သော ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် (SARS-CoV-2) 91.4% ကျော်ကို 6.7m³ ရှိသော စမ်းသပ်နေရာတစ်ခုတွင် 8 နာရီအတွင်း ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
မှတ်ချက်များ- (1) ဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှု ပမာဏကို တိုင်းတာပြီး ၎င်းကို အသုံးပြုကာ ထိန်းချုပ်နိုင်မည့်နှုန်းကို တွက်ချက်သည်။ (2) ဓါတ်ခွဲခန်းအခြေအနေများတွင် တွယ်ကပ်နေသည့် ဆန်းသစ်သော ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အပေါ် nanoe™ X ၏ သက်ရောက်မှုများနှင့်ပတ်သက်သည့် အခြေခံ သုတေသန အချက်အလက်များအား ထုတ်ပေးရန် ဤအတည်ပြုချက်ကို ဖန်တီးထားပါသည်။ အမှန်တကယ် သက်ရောက်မှုများသည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းသုံးစွဲမှုပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားမှု ရှိပါသည်။
ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ထားသော ကွန်ရက် အဒက်ပ်တာနှင့် Panasonic Comfort Cloud အက်ပ်တို့ကို အသုံးပြု၍ တည်နေရာ 1 ခုတည်း (တည်နေရာ 10 ခုအထိ) တွင် လေအေးပေးစက် အလုံး 20 ထိ ချိတ်ဆက် တပ်ဆင်နိုင်ပြီး ၎င်းတို့အားလုံး၏ လေအေးပေးစနစ် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဝင်ရောက်သုံးစွဲခြင်း၊ စုစုပေါင်း စွမ်းအင်အသုံးပြုမှု အချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ လေအေးပေးစက်များ သုံးစွဲမှုကို ခြေရာခံစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် စက်ချို့ယွင်းမှု အသိပေးချက်များဖြင့် ပြဿနာများကို သက်သက်သာသာ ရှာဖွေဖော်ထုတ်၍ ကုစားခြင်း စသည်တို့ကို မိုဘိုင်းစက်တစ်ခုထဲကနေ၍ ထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
စိုထိုင်းဆ အာရုံခံစနစ်သည် အကောင်းဆုံး အိပ်စက်အနားယူနိုင်သော ပတ်ဝန်းကျင်ကို ချိန်ညှိလုပ်ဆောင်ပေးသည်
Panasonic ၏ စိုထိုင်းဆ အာရုံခံစနစ် ပါဝင်သည့် iAUTO-X နည်းပညာအသစ်က အကောင်းဆုံး အိပ်စက်အနားယူနိုင်သော ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးပေးရန် နှိုင်းယှဉ်စိုထိုင်းဆကို 60% အောက် အမြဲတမ်း စောင့်ကြပ်ချိန်ညှိပေးသည့်အတွက် သင်သည် သက်သောင့်သက်သာရှိသော အေးမြမှုဖြင့် ပို၍ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်စက်နိုင်ပါသည်။
အဆင့်မြှင့်ထားသော AEROWINGS အသစ်နှင့် 15 မီတာအထိ လေမှုတ်ပေးနိုင်စွမ်း
အဆင့်မြှင့်ထားသော AEROWINGS အသစ်တွင် သီးခြားစီ ထိန်းချုပ်ထားသော ပန်ကာဒလက်နှစ်ခုကို ပေါင်းစပ်တပ်ဆင်ထားခြင်းဖြင့် 15 မီတာအထိ ကြာရှည်လေမှုတ်ပေးနိုင်သည်။ ပိုကြီးသော လေမှုတ်ပန်ကာ (105mm) နှင့် ပိုကြီးသော လေထွက်ပေါက် ပန်ကာဒလက် (103mm) တို့က အချိန်တိုအတွင်း တစ်ခန်းလုံးကို အေးမြစေပြီး 10%* ပို၍ လေမှုတ်ပေးနိုင်ကာ 20%* ပိုမြန်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင့်အနေဖြင့် အခန်းထဲတွင် ရှိနေချိန်တိုင်း သက်သောင့်သက်သာရှိသော အေးမြမှုကို ခံစားရနိုင်ပါသည်။
* ယခင် ပရီမီယံ အမျိုးအစား (1.5HP) နှင့် နှိုင်းယှဉ်ထားသည်။
iAUTO-X ကွန်ပရက်ဆာကို စဖွင့်ချိန်မှစ၍ အမြင့်ဆုံးကြိမ်နှုန်းသို့ မြန်မြန်ရောက်ရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သော Panasonic Thermal Enhancement နည်းပညာ (P-TECh) ကို သုံး၍ 25%* ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ အေးမြစေသည့်အတွက် ချစ်ချစ်တောက်ပူသော နေ့တစ်နေ့မှာပင် ချက်ချင်း သက်သောင့်သက်သာရှိသော အေးမြမှုကို ခံစားနိုင်သည်။ အခန်းထဲတွင် လူများလာပြီး အခန်းအပူချိန် တဖြည်းဖြည်း တက်လာသည့်အခါတိုင်း ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကို ပြန်လည် အသုံးချနိုင်သည့်အတွက် သင့်ဧည့်သည်များကို အမြဲတမ်း သက်သောင့်သက်သာရှိနေစေပါမည်။
1.5HP X-PREMIUM အင်ဗာတာ မော်ဒယ်ကို အသုံးပြုပြီး iAUTO-X စနစ်နှင့် သာမန်အအေးပေးစနစ်တို့အား နှိုင်းယှဉ်ချက်။
ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်မှုမရှိစေသော နည်းပညာများနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော လူနေမှုဘဝ
သက်သောင့်သက်သာရှိမှုနှင့် စွမ်းအင်ချွေတာမှုများကို သင့်တော်လျောက်ပတ်စွာ ထိန်းညှိပေးသည်
အလိုအလျောက် လုပ်ဆောင်နိုင်သော အသိဉာဏ် (A.I) ထိန်းချုပ်မှုဖြင့် လုပ်ဆောင်သော ECO စနစ်သည် စဉ်ဆက်မပြတ် သက်သောင့်သက်သာရှိသော အေးမြမှုကို ပေးစွမ်းလျက် အများဆုံး 20%* အထိ စွမ်းအင်ချွေတာနိုင်ရန် ECO အဆင့်ကို လေ့လာအကဲဖြတ်ပေးသည်။
* 1.5HP အင်ဗာတာ အမျိုးအစားကို အသုံးပြုပြီး ECO စနစ်နှင့် သာမန်စနစ်တို့အား နှိုင်းယှဉ်ချက်။
လက်တွေ့အသုံးပြုနိုင်မည့် ခေတ်မီဒီဇိုင်းပုံစံကို ဖန်တီးထားသည်
မည်သည့် အခန်းတွင်း အပြင်အဆင်နှင့်မဆို လိုက်ဖက်မှုရှိအောင် ဖန်တီးထားသည်
ရိုးရှင်း၍ ခပ်မှိုင်းမှိုင်း အရောင်တင်ဒီဇိုင်း။ ၎င်း၏ အရည်အသွေးကောင်း၍ ခေတ်မီပြီး ကျက်သရေရှိသော ဒီဇိုင်းသည် လေအေးပေးစက်ကို မည်သည့်နေရာနှင့်မဆို လိုက်ဖက်သွားစေသည်။ ရီမုဒ်ဒီဇိုင်းအသစ်၏ စွမ်းရည်မြင့် ဒီဇိုင်းက လက်ထဲတွင် သက်သက်သာသာ ကိုင်ထားစေနိုင်ပြီး အသုံးပြုရာတွင်လည်း လွယ်ကူ အဆင်ပြေစေသည်။
မည်သည့်နေရာတွင်မဆို အံဝင်ခွင်ကျ တပ်ဆင်နိုင်သည်
ကျစ်လျစ်ပေါ့ပါးသည့် လေအေးပေးစက်ကို မျက်နှာကြက်၊ နံရံထောင့်တို့နှင့် နီးကပ်သည့် နေရာများ၊ တံခါးနှင့် ပြတင်းပေါက် အပေါ်ဘက်နေရာများကဲ့သို့ ကျဉ်းကျဉ်းကျပ်ကျပ် နေရာများတွင် အလွယ်တကူ တပ်ဆင်နိုင်သည်။ ၎င်း၏ တစ်မူထူးခြားသည့် ဒီဇိုင်းပုံစံကြောင့် အချိန်မကုန်၊ လူမပင်ပန်းဘဲ အလွယ်တကူ တပ်ဆင်၍ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ဆောင်နိုင်စေသည်။
* Please check the minimum space requirements for installation.
3.67 (1.02-4.20) kW
12,500 (3,480-14,300) Btu/h
3.67 (3.92-3.50) W/W
12.50 (13.38-11.92) Btu/hW
1,000 (260-1,200) W
12.0 m³/min (425 ft³/min)
30.9-30.9 m³/min (1,090-1,090 ft³/min)
870 mm (34-9/32 inch)
229 mm (9-1/32 inch)
* When pipes are not extended from the chargeless pipe length, the required amount of refrigerant is already in the unit.
Long Air Distance with The Improved New AEROWINGS
Panasonic’s New AEROWINGS provides longer airflow up to 15 meters with bigger cross flow fan and larger outer flap.
How to Clean and Service Your Air Conditioner
Your air conditioning units require regular maintenance to function optimally. Find out how you can easily clean your air conditioner here.
Best Temperature Settings for Every Need and Occasion
Discover the optimum temperature for every need and occasion in your home, as well the type of air conditioner to use.
Panasonic Air Conditioner: Inverter vs Non-Inverter
Learn the differences between inverter and non-inverter air conditioners to determine the ideal cooling companion for your living space.